Monday, 01 July 2013 09:13
Sirdoon Maraykan ah oo kamida Sirdoonada Maraykanka laguna magacaaba NSA ayaa waxaa la ogaadey inay Wadamo badan oo Adduunka ah jaajuusaan. Nin kamid ahaa shaqaalaha Sirdoonkaa ayaa waxaa uu la fakaday Sir badan kadibna waxaa uu usoo bandhigay oo u waramay Noornaal kasoo baxa Waddanka Ingiriiska.
Wadamada la Jaajuusay ayaa waxaa kamida Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaaniga iyo Wadamao badan oo kale oo ay Maraykanka Saaxiib yihiin.
Dad badanayey arintaa kayaabisay maxaa yeelay baa layiri, Wadamadaa waa Saaxiibyo iyo Xulufoda Maraykanka. Safaaradaha Wadamo badan ee Maraykanka iyo Saldhiga Qaramada Midoobey ayaa waxaa lagu qariyey baa layiri, qal yar yar oo qarsoon oo wax lagu dhageysto. Fiilooyinka Isgaarsiintana waa la dhuuqay.
Masar oo Mudaharaad Culus ka dhacay iyo ilaa 7 Qof oo ku dhintay
Monday, 01 July 2013 09:04
Waddanka Massar ayaa waxaa ka dhacay Mudaharaad Culus oo looga soo horjeedo Madaxweynaha Masar. Mudaharaadkaa ayaa wuxuu ka dhacay meelo badan oo Dalkaa kamida. waxaana la sheegay ugu yaraan 7 Qof inay ku dhinteen si yaalo kala duwan.
Mucaaradka Masar ayaa dhawaan oodhanwaxaa ay wadeen Mudaharaadyo Culus oo loogasoo horjeedo Madaxweynaha Masar.
Tuesday, 25 June 2013 00:48
Maxkamad kutaal magaalada Milan ee Dalka Talyaaniga ayaa Ra'iisul Wasaarihii hore ee Talyaniga, Silvio Berlusconi waxaa ay ku xukuntay 7 Sano oo Xarig ah.
Berlusconi aya Dacwad Sanado badan qaataday lagusoo oogey waxaana lagu eedeeyey inuu intii uu Ra'iisul wasaaraha Talyaaniga ahaa, wax yaalo badan oo sharciga ka baxsan uu ku kacay. Waxaana ka mida Danbyada lagu hayo, inuu Gogol dhaaf la sameeyey gabdho la sheegay inay midood waqtigaa aysan Qaangaar ahayn. Waxaa kaloo lagu eedeeyey Musuqmaasuq iyo inuu ku ciyaaray oo si aan sharciga waafaqsanay uu u isticmaalay awoodiisa Xukunka.
Berlusconi aya la sheegay inuu yahay Ninka Talyaaniga ugu Taajirsan uuna leeyahay Idaacado badan oo isugu jira Joornaalo, Telefeshin iyo Radio. Waxaa lafilaya baa layiri inuu Berlusconi heli doono ama isku dayayo inuu heli, dariiq uu uga fakado xukunka lagu xukumay, maxaa yeelay waa Nin Khatal iyo xaalad badan baa layiri.
Nin Yuhuud ah oo la toogtey kadib markuu yiri "Allahu Akbar"
Waxaa Magaalada Qudus lagu toogtey Nin Yuhuudi ah oo ku cibaadaysanayey Derbi Masjidka Al-Aqsa u dhow oo Yuhuudu ku cibaadeystaan.
Afhayeen Booliska u hadlay ayaa wuxuu yiri, Ninku wuxuu ku dhawaaqay erayga "Allahu Akbar" kadibna Nin wardiye ahaa ayaa wuxuu u maleeyey inuu yahay Argagixis Falastiin ah oo raba inuu is qarxiyo, saa awgeed ayuu toogtey oo durba dhawr Xabadood ku dhuftay. Ninkiina isla meeshii ayuu durba ku dhintay.
Qarax Ismiidamin ah iyo Weerar iswata oo loogeystey Xarunta UNDP ee Muqdisho
Wednesday, 19 June 2013 20:25
Waxaa Xarunta UNDP da ee Magaalada Muqdisho ka dhacay Ismiidaamin iyo Weerar iswata. Qof ayaa wuxuu fuliyey Qarax ismiidaamin ah kadibna Kooxo aad u hubaysan ayaa Shismihii usoo dhacay oo Rasaas kala daaley Dadkii meesha ka shaqaynayey. Waxaa la sheegay ugu yaraan 16 Qof inay weerarkaa ku dhinteen. 16 daa Qof ayaa waxaa la sheegay inay 3 kamida Cadaan yihiin.
Shirkad Waddanka Koonfur Afrika laga leeyahay oo Hubka soosaarta ayaa waxaa ay qireen in 2 Shaqaalaheeda ka mida ay ku dhinteen Dagaalkaa.
Kooxda Al-Shabaab ayaa xoogaa Weerarkii kadib waxa ay sheegteen inay iygu kadanbeeyeen falkaa.
Sacuudiga oo sheegay inay Mucaaradka Suuriya Hub siindoonaan
Sunday, 16 June 2013 22:06
Waddanka Sacuudi Carabiya ayaa waxaa ay sheegeen inay Mucaaradka Suuriya Hub ku caawin doonaan. Hubka ay rabaan inay Mucaradka suuriya siiyaan ayaa waxaa ay sheegeen inuu yahay Qori nooca Lidka Diyaaradaha ah oo Garabka laga rido.
Haddii ay Mucaaradka Suuriya helaan qorigaa oo la sheegay mid aad casri u ah inuu yahay Faransiiskana lagu sameeyey, ayaa waxaa la sheegay in Xoogga dhanka Hawada ah ee Ciidamada Suuriya wax weyn u dhimi karto.
Maraykanka oo sheegay in Xukuumada Suuriya Gaaska sunta ah isticmaashay, saa awged uu Maraykanku lasoo faragelayo arimaha Suuriya
Friday, 14 June 2013 11:08
Waddanka Maraykanka ayaa waxaa ay sheegeen inay hayaan cadeymo in Ciidamada Suuriya ay isticmaaleen Gaaska Sunta ah. Saa awgeed ay tahay arin aan loo dulqaadan karin, Xukuumada Suuriyana ay ´dhaafeen Xadduud lamadhaafaan ah. Maraykanka ayaa waxaa uu sheegay inay Mucaaradka Suuriya caawin doonaan oo Hub usoo gudbinayaan.
Hubka goorta loosoo dudbinayo Mucaaradka Suuriya iyo nooca uu yahay ayaan weli la cadeyn. Sirdoonka Maraykanka ayaa iyaguna sheegay inay caawinayaan Mucaaradka Garabka dhex dhexaadka ah.
Mucaaradka Suuriya ka dagaalamaya ayaa waxaa ay leeyihiin dhar garab. Waxaa ka mida garab mayal adag oo lasheegay inay Argagixisada taageeraan ama xiriir la leeyihiin. Marka wadamada Reer Galbeedka oo dhan ayaa mudo dheer waxaa ay ka cago jiidayeen inay Caawiyaan Mucaaradka suuriya, oo waxaa ay ku candacoonayeen sida lagu caawin Karo cid aan la aqoon meel ay kayimaaden iyo waxa uu hadafkoodu yahay iyo qorshaha ay wataan.
Baarlamaanka Midowga Yurub oo go'aansaday in Xuduudaha Yurub lagusoo celinkaro Baaridda Xuduudaha
Baarlamaanka Midowga Yurub ayaa waxaa ay Go'aan ku gaareen, in Mustaqbalka lasoo celin Karo Controlkii Xuduudaha ee Yurub. Wadamada Midowga Yurub ayaa waxaa ay beri hore Heshiis ku galeen, inla qaado Baaritaamada Xuduudaha ee Gudaha Yurub. Waxaana ay arintaa si tartiib tartiib ah u hirgaliyeen lagasoo bilaabo bilowgii sagaashameedyadii.
Iyaamihii ugu danbeeyey ayaa Wadamo uu jarmalku ugu horeeyo waxaa ay wadeen olole ah in loo fasaxo inay Xuduuda Dalkooda baaritaankii kusoo celiyaan, kadib markii ay ka cawdeen inay Dalkooda kusoo badanayaan Xaqooti Afrika kayimid oo Talyaaniga soo maraya iyo Dad ka imaanaya Bariga Yurub sida Bulgaria iyo Romania oo Germayn soo aadaya iyaamihii ugu danbeysey tan iyo markii Wadamadaa lagusoo daray Midowga Yurub, si ay Nolol fiican ama shaqo uga helaan Germayn.
Waxaa ay shegeen Qaramada Midoobey qaybtooda Xuquuqda Insaanka qaabilsan, in dagaalka Suuriya ka socda ay ku dhinteen in kabadan 93 Kun oo Qof. Waxaa ay sheegin in laga soo bilaabo kala barkii 2012 Dadka ugu badan ay ku dhinteen agagaarka Caasimada Dimishiq.
Waxaa la sheegay in lagasoo bilaabo ilaa waqtigaa isku celcelis Bilkasta ilaa 5 Kun oo Qof ay dhintaan. waxaa kale oo la haya aby dheheen, cadeymo sheegaya Carruur la ciqaabay iyo Ilmo la xasuuqay.
Waxaa la sheegay inaan Tirada dhabta ah ee Dadka Dagaalkaa Suuriya kasocda la ogeyn, laakiin ay Xaqiiqdii wax badan Tirada kor kuqoran ka badanyihiin.